जन्मनेबित्तिकै बच्चा छोडेर कहाँ जान्छन् आमा ?
सागर चन्द, कृष्ण लोथ्याल काठमाडाैं, २१ साउन
यसअघिका शृंखलामा हामीले भ्वाइस अफ दि फिटस संस्थामा गर्भवती युवती तथा महिला आउने गरेको उल्लेख गर्यौं । कहाँबाट आउँछन् वा ल्याइन्छ त गर्भवती युवती तथा महिला ? र, तिनले जन्माएका सन्तानलाई के गरिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछ यो शृंखला ।
यहाँ देशभरका विभिन्न स्थानबाट अनिच्छित तथा बाध्यतावश गर्भधारण गरेका युवती तथा महिला आउँछन् । उनीहरूलाई बच्चा जन्माउन प्रेरित गरिन्छ ।
कहिलेकाहीँ अनिच्छित गर्भधारण हुन सक्छ । जबर्जस्ती करणी, हाडनाता करणी अथवा महिलाले सन्तान जन्माउन नचाहेमा गर्भपतन गराउन पाउने भन्दै सरकारले गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता दिएको छ । गर्भवतीको मन्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भ स्वीकृतिप्राप्त अस्पतालमा पतन गर्न पाइने कानूनी व्यवस्था छ ।
मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको २८ ‘ख’ अनुसार सरकारले सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रक्रिया १० पुस २०६० मा राजपत्रमा प्रकाशित नै गरेको थियो ।
रहस्यमयी घर- १ :
गोदावरीको याे घरमा किन जान्छन
त्यसो त अहिले सरकारले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ नै लागू गरिसकेको छ । यो ऐनको परिच्छेद ४ ले महिलालाई सुरक्षित गर्भपतन गराउन पाउने अधिकार दिएको छ ।
कानूनले गर्भपतन गराउने बाटो खुला गरेको भए पनि ‘यौन दुरुपयोग बन्द गरौं, अनिच्छित गर्भको रोकथाम गरौं’ भन्दै खडा भएको यो संस्थाले अनिच्छित गर्भधारण गरेका महिलालाई बच्चा जन्माउन उत्प्रेरित गर्छ । युवती तथा महिलाले बच्चा जन्माउँछन् र यहीँ छाडेर जान्छन् ।
‘यहाँ आइसकेपछि लगभग १३ जनाले बच्चा जन्माए । यसअघि नख्खिपोटको भाडाको घरमा त धेरै जन्मिए,’सोमन (एलिसा) राईले सुनाए ।
अनिच्छित गर्भधारण गरेका युवती तथा महिलाले जन्माएको बच्चा कहाँ जान्छन् त ?
‘बच्चा नभएको परिवारलाई दिने । बच्चाको खाँचो भएकालाई दिने,’ सिधा जवाफ छ राईको ।
रहस्यमयी घर- २ :
बच्चा जन्माउने घर तर अस्पताल
बच्चा आवश्यक हुनेले यो संस्थामा सम्पर्क गर्नुपर्छ । निवेदन दिनुपर्छ । राई भन्छन्, ‘बच्चाका लागि मान्छेहरू कन्ट्याक गर्छन्, बच्चा चाहियो भनेर । हामीसँग निवेदन गर्नुपर्छ । हामी छानबिन गर्छौं ।’
राई आफू र आफ्नो संस्थालाई बच्चा चाहिने र नचाहिनेबीचको ब्रिज अर्थात् पुलका रूपमा चिनाउन खोज्छन् । उनी भन्छन, ‘हामी यस्तो केस खोजेर जाँदैनाैं। मान्छे आफैं खोज्दै आउँछन् । हामी यो बीचमा ब्रिज बनेका छौं ।’
त्यस्तै, संस्थामा बच्चाका लागि प्रशस्तै निवेदन परेको दाबी गर्छन् राई ।
संस्थाको नियमअनुसार बच्चा दिने आमाले आफ्नो बच्चालाई दूध खुवाउन पनि पाउँदैनन् । ‘मानव जीवनको सबैभन्दा ठूलो प्रेम भनेको मातृत्व नै हो’ भन्दै संस्थाको विधान प्रस्तावनामा लेखिएको छ । तर, राई भन्छन्, ‘बच्चा दिने हो भने दूध नखुवाउनुहोस् । यहाँ आएपछि हामी सबै गरिहाल्छौं ।’ स्वास्थ्य सेवाको आधारभूत कानूनले पनि बच्चा जन्मेको एक घण्टाभित्र आमाको दूध खुवाउनुपर्छ भन्छ ।
नवजात शिशु आमामाथि नै निर्भर हुन्छ त्यसैले पनि आमाले दूध खुवाउनु अनिवार्य हुन्छ । बच्चाको स्वास्थ्य मात्रै होइन, जीवनका लागि पनि आमाको दूध अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, राई भने डाक्टरसँगको मिलेमतोमै बच्चालाई दूध नखुवाउने गरेको बताउँछन् ।
‘सुत्केरी गराउने अस्पतालका डाक्टरलाई हामीले भनेका हुन्छौं । त्यसैले हुन्छ,’ राईले भने । आमाको दूधबाट वञ्चित गरिएका नवजात शिशुलाई चम्चा वा प्लास्टिक निप्पलको सहायताले दूध खुवाइन्छ । राईको संस्थामा आउने गर्भवतीलाई सुत्केरी गराउन प्रसुती गृह थापाथली ल्याईन्छ ।
थापाथली प्रसुती गृहका डाक्टरसँग आफूले पहिल्यै सल्लाह गर्ने गरेको बताउँछन राई । डाक्टरसँगको सल्लाह अनुसार नै बच्चालाई दुध नखुवाईने उनले भने ।
बच्चा जन्माइसकेपछि आमा त्यस घरमा धेरै दिन बस्दिनन् । राईका अनुसार डाक्टरले आमा र बच्चाको स्वास्थ्य नाजुक छ भन्दै, दबाब नदिने हो भने २ देखि ५ दिनमा बच्चा छाडेर जान्छिन् आमा ।
डाक्टरले आमा र बच्चालाई संगै राख्नुपर्छ भनेर बढी नै दबाब दिएमा बच्चालाई आमासँग बढीमा १ महिना राख्ने गरेको पनि राईले सुनाए । ‘बढी बसे भने एक महिना बस्छन् बच्चासँग,’ राईले भने ।
आमाको दूध नै नखाएका ती बच्चा आखिर कसले लान्छ त ?
‘बच्चा पास्टरले लग्यो अरे । दाइहरूकै (सोमन राई) चर्चको मान्छेले लग्यो रे,’ घरसँगै जोडिएको तरकारी फार्मकी महिलाले सुनाइन् ।
(आगामी शृंखलामा हामी राई र उनको संस्थाको चर्च कनेक्सनबारे लेख्नेछौं । त्यसपछिका शृंखलामा हामी यस विषयका कानूनी प्रक्रियाबारे लेख्नेछौं ।)
यसअघिका श्रृंखला :
बच्चा जन्माउने घर तर अस्पताल होइन
गोदावरीको याे घरमा किन जान्छन् गर्भवती ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २१, २०७६, ११:३५:००
सागर चन्द, कृष्ण लोथ्याल
शिलापत्र समाचार प्रभाव : ‘भ्वाइस अफ दि फिट्स’मा प्रहरीकाे छापा
सरकारको आँखा छल्दै नवजात शिशुको अवैध लेनदेन
गर्भ संरक्षणका नाममा गैरकानूनी धन्दा ?
रहस्यमयी घरको चर्च कनेक्सन